Iindaba -Ukulangazelela kunye noxinano lwe-Foam Metal
Ngo-2015, i-matrix yesinyithi edityanisiweyo yezixhobo ezenziwe ngogonyamelo zaphuculwa ngokudibeneyo ngabaphandi abavela kwi-DST naseNew York University Institute of Technology.
Inobuninzi be-0.92 g / m3 kuphela kwaye iyadada emanzini. Kuyamangalisa ukuba le nto inamandla anelisayo ngelixa ifezekisa ubunzima obunzima, kwaye igobolondo layo elilodwa elijikelezayo linokumelana noxinzelelo lwama-25,000 eepawundi nge-intshi nganye ngaphambi kokuphuka. Xa kuthelekiswa namagwebu esinyithi emveli, uncedo lwesinyithi esisekwe kwisiseko sogwebu kukuba uxinano lungenziwa ngaphakathi kuluhlu oluthile, kwaye ubungakanani kunye nemilo yemingxunya nayo inokulawulwa.
Ukunyanzelwa kwesinyithi seMigodi
Ukunyaniseka kubhekisa kumyinge wevolumu yazo zonke ii-pores ezisemzimbeni ongena emzimbeni ukuya kumthamo opheleleyo womzimba onamafutha, ngumlinganiso oqhelekileyo wendawo engenanto yomzimba ongena emzimbeni. I-porosity yesinyithi sogwebu ngesiqhelo ifikelela ngaphezulu kwe-90%, kwaye sisinyithi esinyukayo esinamandla athile kunye nokuqina. Olu hlobo lwesinyithi lune-porosity ephezulu, kwaye ubukhulu bepore bunokufikelela kwinqanaba lemilimitha.
Ukuxinana kwe-foam yentsimbi kwenza ukuba izinto zetsimbi zenziwe ngezinto ezizodwa. Umzekelo, izinto zentsimbi ezenziwe ngogwebu ezisetyenziswa kwicandelo lokwenziwa kweemoto, zinokunciphisa ubunzima bezithuthi, ziphucule ukusebenza kakuhle kwepetroli, kwaye zonyuse ukhuseleko lwabakhweli kwimeko yengozi ngoncedo lwamandla okufakwa kwamandla.
Kwimveliso yokwenyani, kwafunyaniswa ukuba uninzi lwezinto ezizenzekelayo zinokwenziwa nge-aluminium enegwebu. Ezifana nekhava ephezulu, isiciko esisezantsi, izihlalo, ii-bumpers, ngaphambili nangasemva imiqadi emide, njl.Umzekelo, iphaneli yophahla eyenziwe nge-sandwich foam aluminium evela kwi-Kaman Automobile Inkampani yaseJamani inokuqina malunga namaxesha ama-7 aphezulu kunalawo ezinto zentsimbi, kodwa ubunzima bayo bumalunga ne-25% elula kunezinto zentsimbi.
Isalathiso: Imbali yophuhliso lwentsimbi
Ngomnyaka we-1948, uSosnik wacebisa ukulungiswa kwesinyithi se-aluminium kunye ne-mercury vaporized, ephawula ixesha lokuqala lokuba abantu babe nengcamango yentsimbi. Okwangoku, yaqhekeza ixesha elide ithiyori yesiko yokuba isinyithi sinesakhiwo esixineneyo kuphela.
Ngo-1951, u-Elliott waphumelela ukuvelisa i-aluminium ene-foam ngokunyibilikisa indlela yokugalela amagwebu.
Ngo-1983, iphepha elipapashwe yi-GJDVIES laphawula ukuqala ngokusesikweni kophando ngenkqubo ye-foam yentsimbi, kwaye uphando nge-foam yentsimbi yaqala ngexesha elisebenzayo.
Ngo-1988, i-Porous Solids-structure & Properties-epapashwe ngu-LJ Gbson & MF Ashby iseyeyona nto ibalulekileyo kwicandelo lophando lwezixhobo ezinomhlwa.
Kwi-1991, iZiko loPhando lwezoShishino laseKyushu laseJapan liphuhlise inkqubo yemveliso kwimveliso yezemveliso yealuminiyam enegwebu.
Ngo-2000, u-Ashby kunye neqela lakhe baqala ngokushwankathela indlela yokulungiselela, ukusebenza kunye nolwalathiso lwesicelo se-foam yentsimbi.
Ukusukela ngo-2000, itekhnoloji yokulungiselela yamasuntswana amahle iye yakhula ngokuthe ngcembe, kwaye icandelo lophando lwamagwebu esinyithi nawo sele eqalile ukukhula ngokukhawuleza.